(သိပ္ပံဘာသာရပ် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ Wilson, Edward (1999). Consilience: The Unity of Knowledge. New York: Vintage. ISBN 0-679-76867-X။
↑ Fleck, Ludwik (1979). Genesis and Development ofaScientific Fact. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0226253252။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သိပ္ပံပညာ&oldid=535501" မှ ရယူရန်
၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၆:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။